Uma kungekho impilo ekhwalini yakho okwamanje - kulula ukulungisa! Kwanele ukwenza isinqumo ngokuguqulwa kwesigcawu somuntu siqu emgwaqweni kusuka esitolo samabhokisi angenalutho sibe yindawo ehlelekile lapho ungase uhlale khona ngaphezu kwekhefu letiyi, uhlonipha ukushona kwelanga lokushona kwelanga ... Ungakwenza kanjani ukulungiswa ebhalini ngezandla zakho? Into eyinhloko ukuveza iphutha ...
Ama-balconi okuqala abhekene nomgwaqo, avela ekhulwini le-XVI ekwakhiweni kukaFlorence: ukuhlela ama-reception amahle, abanikazi bamaqaba babonisa inhlalakahle yabo kubo bonke abadlulayo. Ungacabanga ukuthi yibaphi uhlobo lwombono ongaba nalo phakathi kwabadluli-lapho bebuka "isibonakaliso semigomo yokuphila" yabanikazi abavela ezikhungweni zanamuhla eziphakeme! Yini ongayiboni emabhaleni ethu: imishini yezemidlalo, izindlu zemishini yamabhokisi, nezikhwama zamathoyizi, lapho izingane sezikhulile khona kakade. Kodwa konke kungaba okuhluke kakhulu uma wenza ibhaluni
(noma loggia) ukuqhubeka kwefulethi: vele uzinike enye, ngisho neyincane, kodwa igumbi. Cha, asikhulumi ngokujoyina i-loggia ebhodini kuyo yonke indawo yokuphila: ngokuphambene, uma izimo zangaphandle zivuma, ukuvuleka kwesikhala kufanele kugcinwe. Enye into ukuthi indlela yokubhalisa kufanele ibe yinto engathí sina futhi eyisisekelo njengalezo zonke izindlu.
Isinyathelo 1: Bala futhi ulungise.
Uyothola injabulo engenakuqhathaniswa uma uphuma ebhokisini zonke izinto. Mhlawumbe, kukhona okuzobuya lapha, kodwa kakade emqondweni wesikhathi esizayo "project design". Manje, uma umklamo ungaqala, njengoba besho, kusukela ekuqaleni, sekuyisikhathi sokukhetha ukuphela. Namuhla akuyona imfashini yokumboza wonke umklomelo ngamabhodlela noma amabhodi, futhi nakakhulu ngakho akufanelekile ukumboza phansi nge-linoleum. Ufuna ukuba yinto ejwayelekile kakhulu - khetha i-tile ye-ceramic noma itshe lemvelo (okungcono kokubili phansi nasezindongeni). Noma kunjalo, ungakwazi ukudweba izindonga: ngqo ngokukhonkolo okungalingani futhi mhlawumbe kunombala othi "uyacaca" (kunokuba umbala we-pastel). Futhi ungasebenzisa futhi usebenzise i-plaster ngomphumela wesikhathi esidala. Izitimela nezithiyo kuyisihloko esihlukile. Ikhetho elihle kunazo zonke - ama-grilles amancane, avulekile ngezinye izikhathi: azohambisana nendawo yokuvolonti evamile kanye nebhaluni. Uma usengakhumbula ukulungisa i-balcony, ungakhathazeki: kuningi okungenziwa ngefenisha, ingadi nezesekeli.
Isinyathelo 2: Thatha ifenisha.
Labo abanikazi abajabulayo be-loggias evulekile bangakwazi ukukhokhela okuningi: izihlalo zomkhonto ezimbalwa, i-chaise longue, itafula lekhofi, insika noma ngisho ne-sofa encane. Kodwa iningi lebhokisi alikwazi ukusijabulisa ngendawo enkulu, ngakho ifenisha yendawo yangaphakathi kufanele ibe yinkimbinkimbi futhi iyasebenza kakhulu.
Zibekele emkhathini wabangane abasebenzisekayo - izihlalo zokuphoqa, izihlalo zokuhlala kanye nezihlalo. Kunconywa ukuthi uma ubeka ifenisha ungayisebenzisi nje kuphela phansi kanye namadonga ebhodini lakho, kodwa futhi ucingo lwangaphandle, ngisho nokushayela. Isibonelo, uma i-balconi yakho ine-windows sill enkulu, yizwa ukhululekile ukuyisebenzisa esikhundleni se-counter counter. Ungabeka izitezi eziphezulu, wenze ukukhanya okuthakazelisayo nodonga nezibani eziphathekayo - futhi ungamema abangani bakho emcimbini ngombono wedolobha lasebusuku. Noma, faka i-axis ebonakalayo phakathi kwephansi kanye nesilinda sensimbi, lapho "ungacindezela khona" amashelufu, izimbiza zezitshalo ngisho netafula ngezihlalo.
Uma ucabangela ukuthi ifenisha yakho yokuvolonti izovuleka kuyo yonke imimoya, kuyadingeka ukuthi yenziwe ngempahla efanelekayo engamanzi (iplastiki, ingilazi, insimbi engenasici, ukhuni olufakiwe, umvini). Ngaphezu kwalokho, udinga ukucabangela isitayela: ngoba i-balcony empeleni igatsha lamancane edolobheni lezwe, isitayela lapha ikakhulukazi engadini. Nakhu ongayisebenzisa njengendlela yokucebisa ingaphakathi le-balcony:
♦ Ifenisha eyakhelwe kuyo izobukeka imangalisa kakhulu - itafula elinophahla lwengilazi, izihlalo ezimbili zezihlalo ezinezihlalo
♦ Ifenisha evamile ejwayelekile ingabanjwa - kusuka ku-rattan noma kuma-wicker rod.
♦ Akuyona into ebiza kakhulu (kepha edingekayo) yepulasitiki enemibala, uma ifunwa, ingahle ixhunywe kahle nayo yonke enye indawo
Kodwa lokhu konke - ifenisha esiyidingayo njengengqalasizinda yebhokisi. Endaweni ye "patio" udinga ukubeka nezinhlelo zokugcina izinto ezihlukahlukene (khumbula, satshele ukuthi leyo ngxenye yezinto ezenziwe ngesikhathi sokulungisa kufanele ibuye lapha?). Kungaba ama-skis noma amabhayisikili, izitsha, izimbiza zezimbali, amaphakethe omhlaba wezitshalo, amathuluzi ahlukahlukene, amabhokisi angenalutho ... Kungcono uma konke lokhu kufihliwe esigcini esakhiwe ngaphakathi-kungase kube khona ezimbili ngakwesokunene kwelogigia. Kodwa uma ungenalo i-loggia kepha i-balcony onayo, futhi ikamelo lakho alikho indawo yokwakha ikhamera, ungacabangela ukhetho lwe-esifubeni esincane esincane esifubeni-iKhabhinethi, elizohlala lihlangothini olulodwa lendawo. Futhi ezinye zezinto eziphakeme kakhulu zingafakwa ezigubheni ezikhethekile eziphathekayo: zikwazi ukuhlala kuzo, futhi zivumelane kakhulu.
Isinyathelo 3: Cabanga ngezindwangu kanye nokukhanyisa.
Uma i-home cosiness yi-credo yakho, ungasebenzisa amasu alula kakhulu ekuphumeleleni kwayo: izinto ze-wicker nezindwangu. Uma i-balcony yakho ibhekene nehlangothini elangeni, kudingeka ucabange ngokuvikelwa okuguquguqukayo elangeni. Kungaba amacu amakhulu kakhulu noma izimpumputhe zangempela. Ingasetshenziswa futhi isetshenziswe ngokujwayelekile, kodwa ukuvikeleka elangeni kuyilapho kuyoba yinto encane. Kubalulekile ukuba ube nomklamo wokukhanyisa. Into esemqoka ukuthi izibani zikagesi kufanele zenzelwe ukusetshenziswa kwangaphandle. Kungaba:
♦ izibani zikagesi,
♦ Izibani ezine-flame yemvelo (amafutha).
Isinyathelo 4: Izimbali - into ebaluleke kakhulu
Kweminye imizi yasendulo eYurophu, izindlu zezindlu nezindlu ziqaphele umthetho ongabonakali: emabhaleni nasemabhokisini efasitela banezimbali kuphela eziphilayo ezichazwe ngokucacile. Lona uhlobo lomncintiswano othakazelisayo ongekho abawinile. Emklomelo kukhona bonke - bobabili bendawo, nezivakashi zabo. Namuhla, amasiko ezimbali ezimibalabala kancane kancane aqala ukungena emadolobheni ethu. Ukwandisa, ngaphansi kokulungiswa emgodini ngezandla zabo kusho ukudala "ikhoneni elihlaza".
"Ifenisha" yezimbali. Amabhokisi aseplastiki asetshenziswe kabanzi ngobubanzi buka-15-20 cm kanye nokujula kwe-20-30 cm etshalwe khona izitshalo emigqeni engu 2-3 noma ngamaqembu. Emabhokisini wamitha, izitshalo ezinhlanu kuya kwezingu-10 zezinhlobo ezingu-3-5 ezihlukene zingalingana. Qinisekisa ukucabangela lapho ubeka ukuthi yiliphi uhlangothi lwebhokisi oluzoya ebhokisini, nokuthi yikuphi emgwaqeni. Uma ibhokisi lokubhebhe libonakala kuwe futhi inketho engabonakali yokuhlelwa kwemvelo, ungasebenzisa ezinye, izixazululo ezingekho ngaphansi kokuhleleka:
♦ izimbiza eziphambili,
♦ izimbiza (noma amabhasikidi ajwayelekile),
♦ kusekela izitshalo zebhodlela (ishalofu lekhoneni noma isiteji esilingana nesiteji esinezinyathelo ezinkulu),
♦ Isigqoko esimisiwe (phansi phansi singasetshenziswa njengetafula elengeziwe),
♦ Ishalofu elula ngokhuni elinama-tin.
Futhi, yebo, kukhona njalo okukhethwa kukho ukuthi, ngokubonakala kwayo okulula, ngeke kubonakale kuncane kunoma yini. I-ficus, isundu somuthi noma omunye umuthi omkhulu futhi omuhle ebhukwini elikhulu.
I-Haunted House: kanjani ukwenza ukuhlobisa kwe-Halloween ngezandla zakho siqu
Imizwa yasemadolobheni: ingaphakathi ngesitayela sesimanje
Ukukhetha ikhaya lakho
Ingaphakathi ngesitayela se-fusion
Hlanganisa ukungavumelani: ingaphakathi kwezitayela ze-eclectic
Izakhiwo zokwelapha eziwusizo ze-sunflower
Ukupheka imifino, ungalahlekelwa amavithamini
U-Alexey Yagudin, izindaba
I-garlic soup isobho nge-zucchini
Senza imikhonzo yomshado ngendlela efanele
Indlela yokukhipha igesi nokuqeda
UDima Bilan akazange alindele ukuba ngubaba kabili
Ukuphila komuntu siqu ka-Alexander Domogarov
U-Yuri Loza wabangazelela ubuqhawe buka-Yuri Gagarin
Yini engingayinika Ngonyaka Omusha we-2015-2016?
I-Steble isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi